K: အမေ့ခံ ပရဟိတ စေတနာ ရှင်..
တကယ့်ကို စူးနစ် မြုပ် နှံ ၀ံ့ တဲ့ မျိုးချစ် ပုဂ္ဂိုလ်...ပရဟိတ စေတနာ ရှင် ..ဒေါ် တီတီလုစ် ဟာ..အစွန့်ပစ်ခံ မြန်မာ လေလွင့်လူငယ် ၆၀၀၀ ကျော် ရဲ့ မိခင် ကြီး ဖြစ်ခဲ့ ဘူး ပါတယ်။ သူမ ရဲ့ ကလေး တွေ အပေါ် ထားတဲ့ မေတ္တာ ကို..အနှစ် သုံးဆယ် လောက်..မြုပ်နှံ ရင်း..ရန်ကုန်မြို့က.. ခိုကိုးရာမဲ့..လေလွင့်လူငယ်များ ရိပ်သာ မှာ..ခိုလှုံ ခွင့် တွေ ပေး ခဲ့ တယ်။ သူမ ရဲ့ လေးစားစရာ ဘ၀ ပုံရိပ် တွေ ကို.. ဂေါ်ဒွင် လုစ် ရဲ့ စုဆောင်း မှတ်တမ်း စာပေ တွေ ထဲ မှာ..တွေ့နိုင် ပြီး.. ၁၉၇၉ ခု နှစ် မှာ..ဂေါ်ဒွင် လုစ် သေဆုံး တော့.. သြစတြေလျ စာကြည့်တိုက် တခု က..ဒါတွေ ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ထား ပေးခဲ့တယ်။
` ဗမာလူမျိုး တွေ..ဒီထက် ပို ပြီး.. အခု ကျမ တာဝန်ယူ သလို..တူညီ စွာ နားလည် တာဝန် ယူ တတ် လာဖို့..မျှော်လင့် ပါတယ်..ဒါဆိုရင်..လွတ်လပ် တဲ့ ကျမ တို့ နိုင်ငံ ကြီး ဟာ ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်း မွန် လာပါ မှာပါ...´ လို့ ဆို ခဲ့ ဘူး တယ်။
၁၉၅၉ ခု နှစ် မှာ.. ပြည်သူ့ ၀န်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ မူ တွေ အတွက်..ဂုဏ် သိက္ခာ ကြီးမား တဲ့ Magsaysay Award ကို ပေးအပ် ခံ ခဲ့ ရ တယ်။ ( မှတ် ချက် - ၂၀၀၂ က.. ဒေါက်တာ စင်သီယာ မောင်..ဒီဆု ကို ရ တဲ့ အခါ မှာ တောင်.. ဒီဆု ကြီး ဟာ.. မတိုင်ခင်က.. မြန်မာပြည် က..အမျိုးအသမီး တဦး ရ ခဲ့ တယ် ဆို တာ မျိုး..ပြန်လည် ဖော်ညွှန်း တာ မတွေ့ ခဲ့ ရ ပါဘူး ။ ဒီ ဆု ကို မြန်မာ ပြည် က ပုဂ္ဂိုလ် ၃ ဦး ရ ရှိ ခဲ့ ပြီး ၁၉၅၉ မှာ ပဲ၊ နေရှင်း သတင်းစာ တိုက် ကို ထူထောင်သူ အက်ဒွက် လောရုံ (ဦးလောရုံ) လည်း ရရှိ ခဲ့ ပါတယ်။)
The Luce family ata1942 family reunion in Gloucester: (left to right) Daw Tee Tee, Gordon, Dora, son John, daughter Sandra. Daw Tee Tee and Gordon were newly arrived in England after their escape from war-torn Burma. Gordon's sister Dora Luce had been second mother to the children while they were educated in EnglandPhotograph courtesy of Mrs Sandra Harding
ရိပ်သာ ကို တကယ့် ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် အထောက်အပံ့ တွေ အများကြီး ပုံစံ နဲ့ ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပေမဲ့..တကယ့်တကယ် မှာတော့..ဒေါ် တီတီ နဲ့ သူမ အသင်း က သာ အစစ အရာ ရာ တာဝန် ယူ ဦးဆောင် ခဲ့ ရ တာပါ။ ၁၉၂၈ ခု စက်တင်ဘာ (၁) ရက် .. ည ၁၁ နာရီ ခွဲ မှာ.. ဒေါ်တီတီ နဲ့ အဖွဲ့ဟာ.. ရင်းနှီး မိတ်ဖွဲ့ ထား တဲ့.. လမ်းပျော် ကောင်လေး အုပ်စု နဲ့..အိုလံပီယာ ရုပ်ရှင် ရုံ အပြင် မှာ..တွေ့ဆို ခဲ့ ကြ တယ်။ သူတို့ကို ..လူငယ် ရိပ်သာ မှာ..အစမ်း လာ နေ ကြည့်ဖို့.. ရှင်း ပြ တယ်။ တကယ်တော့..ဒေါ်တီတီ က.. ခပ် ရိုးရိုး ကျဉ်းကျဉ်း လေး ပဲ စချင် တာပါ..အများဆုံး ၆ ယောက် လောက် နဲ့ပေါ့..ဒါပေမဲ့.. နောက်ပိုင်း..သူမ ပြန် ပြော ပြ တဲ့ အခါ -
`ဘာမှ တော့ သိပ် အကောင်းစား တွေ မရှိ ပါဘူး...ဘုရား သခင် ကိုပဲ ချီး မွမ်း စရာ ရှိ ပါတယ်... ငါက.. တယောက်ချင်း စီ ရဲ့ လက်ထဲကို တော်ဖီ လေး ၆ ခု ဆီ သေသေ ချာ ချာ ရီ ပီး ထဲ့ ပေး တော့၊ သူတို့အား လုံးက.. ရတနာ မိုး တွေ ရွာ နေပီ လို့ ပြော ကြတယ်..´
ဣနြေ္ဒ ကြီးမားတဲ့.. ကြက်သရေ ရှိလှ တဲ့ ဒေါ်တီတီ ဟာ၊ အခက် အခဲ တွေ ကို ၊အရိုးသားဆုံး ဖြေ ရှင်း ရင် ဆိုင် ခဲ့တယ်။ `ကျမရဲ့အသက်တာ တာဝန်´ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံး ကို၊ သူမရဲ့စာတွေ မှာ၊ ၁၉၄၈ ခု ဇူလိုင် အစိုးရ အတွင်းဝန် များ အစည်းအဝေး ကြီး အပြီး မှာ မှ၊ သုံးစွဲ လာ ခဲ့ တာ ပါ။ အဲဒီ မှာ၊ သူမ အမြဲ သတိ ရ နေ စေတဲ့ မှတ် ချက် တခု ကို၊ အဖွဲ့ဝင် တယောက်က၊ ထ ပြီး ပြော ခဲ့ တာ က...
` မစ္စက်စ် လုစ် ရဲ့ ရိပ်သာ နဲ့ ပတ် သတ် ရင်၊ ကျွန်ုပ် တို့ သိ ထား ရ မှာက၊ သူမဟာ၊ ဒီ ရိပ်သာ ကို ဖွင့်လှစ် ဆောင် ရွက် ဖို့၊ လစာ ပေး ထား ခံ ရ တာ မဟုတ် ပါဘူး။ ဒါဟာ သူမရဲ့ အသက် တာ တာဝန် ပါ၊ ဒီ ရိပ်သာ ဟာ သူမရဲ့ နှလုံးသား နဲ့ ပြု လုပ် ခဲ့ တဲ့ ဖန် တီး မူပါ...´
ဗမာလူမျိုး ပညာရှင်ကြီး ဦးဖေမောင်တင်
Labels: Burma History , Inspiration , People
သူတို့ ဟာ မိဘမဲ့တွေဖြစ်သွားရုံ မကပါဘူး။
အကိုင်အတွယ်မတော်ရင် ဘ၀တခုလုံး စိတ်ရော ကိုယ်ပါပျက်ဆီးနိုင်တာမို့ဦးစားပေးကူညီကြပါလို့ မေတ္တာရပ်လံပါတယ်။
a very nice history lesson :)
ခုလိုအချိန်မှာ တီတီလုစ်အကြောင်းဖတ်ရတာ အချိန်ကိုက်ပါပဲ..။ အမတို့မှာ ခုဆို နာဂစ်နောက်ဆက်တွဲ မိဘမဲ့ကလေးတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးပျိုးထောင်ဖို့တာဝန်တွေ ရှိလာတဲ့အချိန်လေ..။